उदांगियाे ‘अाेली–राष्ट्रवाद’ : नाकाबन्दीकाे पुरस्कार अभिनन्दन,२८ गते बेलुकी ब्ल्याकआउट गर्ने | Sabaiko Online
Home Flash News उदांगियाे ‘अाेली–राष्ट्रवाद’ : नाकाबन्दीकाे पुरस्कार अभिनन्दन,२८ गते बेलुकी ब्ल्याकआउट गर्ने
उदांगियाे ‘अाेली–राष्ट्रवाद’ : नाकाबन्दीकाे पुरस्कार अभिनन्दन,२८ गते बेलुकी ब्ल्याकआउट गर्ने
काठमडाैं । भूकम्पकाे कहर झेलेका नेपाली जनतालार्इ लगत्तै नाकाबन्दी लगाएकाे भारतसामु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले भारतसँग् नझुक्ने प्रण गरे । उनले नाकाबन्दीकाे सामना गर्न जनतालार्इ हुरूक्कै मात्रै पारेनन्, व्यवहारमै देखाए पनि । जसकाे कारण अाेली ‘राष्ट्रवादी’ नेताकाे रूपमा लाेकप्रिय भए र संघीय अाम निर्वाचन उनी र उनकाे पार्टी नेकपा एमाले (वाम गठबन्धन समेत) ले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्याे । हाल अाेली साेही बहुमतका अाधारमा सत्तामा छन् । तर नाकाबन्दीकाे ३ वर्ष पनि पूरा भएकाे छैन, उनकाे व्यवहार ठीक उल्टाे बनेकाे भन्दै जनतामा चर्काे अाक्राेश र विराेधका स्वर उत्पन्न भएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही शुक्रबार दुईदिने नेपालको धार्मिक भ्रमणमा अाउँदै छन् । भन्नलार्इ धार्मिक भनिए पनि यसले नेपालमा ठूलै राजनीति तरंग ल्याएकाे छ । उनको यो भ्रमणलाई यसपाली नेपालीहरुले मन पराएका छैनन् । उनकै स्वागतमा सरकारले अर्बाैं खर्चेर रातारात टालटुले विकास गरेकाे अाराेप खेप्नु परेकाे छ । स्पष्ट रुपमा नै सामाजिक सञ्जालमा अहिले विराेधकाे चर्काे लहर अाएकाे देख्न सकिन्छ ।
नेपालले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानका केही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले गरेको नाकाबन्दी सम्झँदै नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको विरोध गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका विश्व प्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘दुर्इ ठाउँमा माेदीकाे अभिनन्दन किन ? नाकाबन्दीकाे भूल बाेध गराउँदै कि भुल्दै ?’
माेदी अाउनुअघि नै विराेध सुरू भइसकेकाे थियाे सामाजिक सञ्जालमा । ट्वीटरमा प्रयाेक्ताहरूले #BlockadeWasCrimeMrModi ट्रेन्डिङ नै चलाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले शुक्रबार बेलुकी ८ बजे १० मिनेट ब्ल्याकआउट गर्ने भन्दै प्रचारलार्इ तीव्र पारेका छन् । ट्वीटर प्रयोगकर्ता अनुप लामिछाने लेख्छन्– मोदीको कुट्ने कूटनीति र हाम्रा नेताको चिप्लोमेसीको विरोधस्वरुप २८ गते बेलुकी ८ बजेदेखि ८.१० सम्म बत्ती निभाउँ ।
ग्यासको लाइनमा बसेका नेपाली, डिजेल नपाएर एउटै बसको छतमा सयौं जना बसेर यात्रा गरेका तस्बिर राखेर मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपालप्रति गरेको नाकाबन्दीको स्मरण गरिएको छ । ट्वीटर प्रयोगकर्ता बेदान्त ठकुरी लेख्छन्– एमालेका मेरा प्यारा मित्रहरु ! टिएलमा खुट्टो टेक्ने ठाउँ छैन ? नेतृत्वले गलत गरे विरोध नगर्ने ? हिजो पनि विरोध गरिएको थियो आज पनि गरिँदैछ ।
लेखक खगेन्द्र संग्राैलाले नेपालमा माेदी नभएर विकास नभएकाे रहेछ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । माेदीलार्इ प्रभुकाे रूपमा हेरेर नेपाली नेताहरू दुर्इ दिन सडकमा सरसफाइ र विकासकाे प्रहसन गरिरहेकाे अाशयमा व्यंग्य कसेका छन् ।
कवि भूपिन तथा पत्रकार, लेखक मुमाराम खनालले माेदीकाे अभिनन्दन अाफूजस्तै सच्चा नेपाली नागरिकलार्इ सैह्य नभएकाे बताएका छन् । खनालले भारतले २७ सालदेखि लगाएकाे नाकाबन्दीलार्इ हाम्रा सबै पुस्ताले झेलेकाे बताएका छन् ।
घनश्याम श्रेष्ठले नाकाबन्दीकाे कहर सम्झँदै त्यतिबेलाकाे कालाेबजारीकाे अवस्था उजागर गरेका छन् । कवि सरिता तिवारीले अाेलीकाे राष्ट्रवाद नांगिसक्दा पनि उनका भक्तहरू चूप लागेकाे भन्दै राेष व्यक्त गरेकी छन् ।